Imvelo yesikole ilinganisa ukuthi indawo evikelekile ngokomzimba nangokomzwelo nenikezwe kahle abafundi inikezwa abafundi ukuze bagqugquzele impumelelo nokukhula. Imvelo yesikole ikhomba iphesenti labafundi abathola uhlobo ngalunye lokuqondiswa kwezigwegwe esikoleni, kanye nenani lezehlakalo zokuphepha nezezigwegwe ezenzeka phakathi nonyaka wesikole esikoleni. Ezokuphepha nezehlakalo zokuqondiswa kwezigwegwe zihlukaniswa njengezigameko zokumiswa kwabantu, ukuxoshwa kwabantu kanye nezigameko zokuxhashazwa njengoba kubikwe yizikole ngombiko weDiscipline. (Umthombo wedatha: unyaka wesikole ka-2018-2019)
Ngabe lesi sikole sisabela kanjani ekuziphatheni kwabafundi?
Imvelo yesikole ilinganisa ukuthi indawo evikelekile ngokomzimba nangokomzwelo nenikezwe kahle abafundi inikezwa abafundi ukuze bagqugquzele impumelelo nokukhula.
Isilinganiso Sombuso 4.8%
Ngaphandle Kwezimiso ZeSikole
Isilinganiso Sombuso 6.3%
Isilinganiso Sombuso 0.2%
Ukuboshwa okuhlobene nesikole
I-Hawaiian noma i-Pacific Islander:
Kudluliselwa ekusetshenzisweni komthetho
Ezokuphepha nezehlakalo zokuqondiswa kwezigwegwe
Funda kabanzi mayelana nokuqoqwa kwedatha yamalungelo abantu. https://ocrdata.ed.gov/